यी किशोरीले किन बिक्री गरिन् आफ्नो कु’मा’रित्व ! | Rochak
June 6, 2021 NepstokLeaveaComment on यी किशोरीले किन बिक्री गरिन् आफ्नो कु’मा’रित्व !
एजेन्सी । जब एक किशोरीले आफ्नो कु’मारित्व लिलामीमा उद्घोष गरिन्, सर्बत्र हंगमा मच्चियो । तर, आफु किन कुमारित्व गुमाउन वाध्य हुनुपर्‍यो भन्ने सन्र्दभमा तिनले गरेको तर्क निकै मार्मिक र दुख लाग्दो थियो । ‘परिवारको घर बिक्री हुनबाट जोगाउनका लागि’ आफुले कुमारित्व लिलामीमा राख्नु परेको उनको भनाई थियो ।
तर, जब छोरीको यस्तो उद्घोष बुवाआमाले सुने, उनीहरु निकै खिन्न भए । उनीहरुले एक टेलिभिजन अन्र्तवार्तामा भने, ‘हाम्रो छोरीले आखिर किन यसो भनिरहेकी छिन्, हामी दुखी छौं । उनले घर जोगाउनका लागि कुमारित्व बेच्ने कुरा गरेकी छिन् तर हाम्रो घरको कुनै फाइनान्सियल लोन छैन ।’
कैफरिनको अनुसार उनले १५ बर्षमा एक फिल्म हेरेकी थिइन्, टिभीमा । त्यसमा एक किशोरी आफ्नो आवश्यक्ता पुरा गर्न एक रातको लागि आफु स्वंमलाई बिक्री गर्छिन् । यहि फिल्म हेरेपछि उनलाई भ’र्जिनिटी बिक्री गर्ने आइडिया आएको थियो ।